ဟန်းဒရစ် ယိုဟန်းနာ့စ် ခရပ်ဖ်[မှတ်စု ၁] (ဒတ်ချ်: Hendrik Johannes Cruijff; ၁၉၄၇ ဧပြီ ၂၅ - ၂၀၁၆ မတ် ၂၄ မွေးဖွား ) သည် ဒတ်ချ်လူမျိုး ဘောလုံးသမား၊ နည်းပြဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကစားသမားအဖြစ် ဘောလောန် ဒေါရ် ဟုခေါ်ဆိုသော ရွှေဘောလုံးဆု သုံးကြိမ်ရရှိခဲ့ကာ နှစ်များမှာ ၁၉၇၁၊ ၁၉၇၃ နှင့် ၁၉၇၄ တို့ဖြစ်ကြသည်။ ခရပ်ဖ်သည် 'ရီးနပ်စ် မိခယ်စ်' (Rinus Michels) ဖော်ထုတ်ခဲ့သော 'နေရာဖြည့် ကစားကွက်နည်း' (Total Football) ဟူသော ဘောလုံးဒဿနစနစ်၏ ကျွမ်းကျင်သည့်သူ တစ်ဦးဖြစ်ကာ ဘောလုံးလောကတွင် အကြီးကျယ်ဆုံးသော ကစားသမားများထဲက တစ်ဦးဟူ၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ယူဆသတ်မှတ်ကြသည်။ ၁၉၆၀ နှောင်းပိုင်းနှင့် ၁၉၇၀ အစောပိုင်းနှစ်များတွင် ဒတ်ချ်ဘောလုံးအားကစားသည် မှေးမှေးမှိန်မှိန် အခြေနေမှ စွမ်းအားများစုဝေးလာသည့် အခြေနေတစ်ရပ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ခရပ်ဖ်သည် နယ်သာလန် အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်းကို ဦးဆောင်ကာ ၁၉၇၄ ကမဘာြဖလား ဗိုလ်လုပွဲအထိ ခေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ကာ ပြိုင်ပွဲ၏ ကစားသမားအဖြစ် ဖီဖာရွှေဘောလုံးကို ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ ဗိုလ်လုပွဲ(များ)တွင် (တစ်ဖက်လူကို လှည့်စားရန်) အယောင်ပြ ကန်ချက်တစ်ခုကို ပြု၍ ၁၈၀ လှည့်ကာ လိမ်ခေါက်ခြင်းတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့သော ဘောလုံး လိမ်ခေါက်သည့် အကွက်ကို ခရက်ဖ် အလှည့်(အကွက်)' (Cruyff Turn) ဟု ၎င်းကိုအစွဲပြု၍ အမည်ခေါ်ဝေါ်သည်။ ယင်းအကွက်ကို ခေတ်သစ်ကာလ၌ များစွာအသုံးပြုကြသည်။ ကျောနံပတ် (၁၄) ကိုဝတ်ဆင်၍ ပုံမှန်ဝတ်ဆင်သော (၁) မှ (၁၁) နံပတ်များပြင်ပ ဝတ်ဆင်မှုပုံစံကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ တွင် ဥရောပဖလားပြိုင်ပွဲ၌ တတိယချိတ်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၈ အာဂျင်တီးနား၌ ကျင်းပသော ကမ္ဘာ့ဖလား၌ အာဂျင်တီးနား အာဏာရှင် ဟောရ်ဟဲ ဘီဒဲလား (Jorge Videla) ကြောင့် အသင်း၌ပါဝင်ရန် ငြင်းဆိုခဲ့လေသည်။
၁၉၉၉တွင် ခရပ်ဖ်ကို ဘောလုံးသမိုင်းနှင့် စာရင်းအင်း နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ချုပ်ကကျင်းပခဲ့သော ရွေးကောက်မှုတစ်ခုတွင် ရာစုနှစ်၏ အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ် မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဖီဖာ၏ ရာစုနှစ်အတွင်း အကောင်းဆုံးကစားသမားနေရာ မဲပေးရွေးချယ်မှုတွင် ပီလီပြီးနောက် ဒုတိယလိုက်သည်။ ပြင်သစ် မဂ္ဂဇင်းတစ်ဆောင် စီစဉ်သော မဲရွေးချယ်မှုတွင် ရာစုနှစ်အတွင်း အကောင်းဆုံးကစားသမား မဲ၌ တတိယအဆင့်ရရှိခဲ့၏ ။ ထိုမဲပေးရွေးချယ်မှုကို ယခင် ဘောလောန် ဒေါရ် (ရွှေဘောလုံး) ဆုရ ကစားသမားဟောင်းများနှင့် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၉၈ တွင် ၂၀ရာစု ကမ္ဘာ့အသင်း၌ ပါဝင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရ၍ ၂၀၀၂၏ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား အိပ်မက်အသင်း တွင်လည်း ပါဝသ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၀၄၌ သက်ရှိထင်ရှား အကြီးကျယ်ဆုံး 'ဖီဖာ(၁၀၀)' စာရင်းတွင်လည်း ရွေးချယ်ခံရပြန်သည်။
↑ Johan Cruyff။ Goal။6February 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chaplin၊ Mark (27 August 2014)။ European football in the 1970s။ UEFA.org။ 28 August 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Dutch flamboyance, German power and English spirit dominated the European Champion Clubs' Cup in the 1970s, with clubs from those three countries winning the trophy every single year in that decade.
↑ ၉.၀ ၉.၁ "The Netherlands' Grand Master". FIFA.com. Retrieved 15 May 2014
↑ "We are the champions"၊ FIFA.com၊ 11 December 2005။ 24 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယိုဟန်း_ခရပ်ဖ်&oldid=525779" မှ ရယူရန်
၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၀၆:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၀၆:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။